शनि ग्रहले गर्यो राशि परिवर्तन ! यी राशिलाई साढे सातको दशाले दुख दिने ! « Sajhapage24
शनि ग्रहले गर्यो राशि परिवर्तन ! यी राशिलाई साढे सातको दशाले दुख दिने !
प्रकाशित मिति: July 21, 2018
ज्योतिष शास्त्र अनुसार हिजोबाट शनि वक्री भएर धनु राशिमा गएको छ। अब शनि ग्रह आउने सेप्तेम्बेर ६ सम्म रहने ज्योतिषहरुले बताएका छन्। ज्योतिष शास्त्र अनुसार अहिले शनि ग्रहले दुई राशिमा धेरै दुख दिंदै आइरहेको छ भने अहिले शनि ग्रहको साढे सात ३ राशिमा चलिरहेको छ। यस राशि गोचारले विभिन्न ७ राशिहरुलाई शुभ फल दिलाउन सक्छ तर ५ राशिहरुलाई भने धेरैनै दुख मिल्न सक्छ।
शनिको राशि परिवर्तन मेष राशिलाई धेरै अशुभ सावित हुन सक्छ। हरेक प्रकारको दुख बढेर जान सक्ला। अनावश्यक भागदौड बढ्न सक्छ भने आफुले चाहेको केही पनि पुरा नहुनाले दुख बढ्न सक्ला।
यस राशिलाई पनि शनि ग्रहले धेरै दुख दिन सक्छ। पारिवारिक जीवन कष्टमय हुन सक्ला। पारिवारिक जीवनमा उथल-पुथल हुनाले मानसिक तनाव बढेर जाने देखिन्छ। आर्थिक कार्यमा पनि सावधानी अपनाउनु पर्न सक्ला।
मिथुन राशिलाइ शनि राशिले धेरै लाभ दिलाउन सक्ला। आर्थिक रुपमा समय धेरै राम्रो हुन सक्ला। महत्वपूर्ण पद प्राप्त गर्न पनि शनिले सहयोग गर्ने देखिन्छ। सरकारी कार्यमा पनि भनेको जस्तै सफलता मिल्न सक्ला।
दिर्घकालिन रुपमा लाभ मिल्ने कार्य अगाडी बढ्न सक्ला। कार्यक्षेत्रमा अनुकूल वातावरण बन्ने देखिन्छ। पदोन्नतिको पनि प्रबल संभावना रहने देखिन्छ भने अध्ययनमा पनि भनेको जस्तै सफलता मिल्न सक्ला। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुसँग भेटघाट हुन सक्ला।
यस राशि हुनेहरुको लागि शनिले दुख बढाउने देखिन्छ भने मेहनत पनि अत्याधिक रहन सक्ला। निर्धारित कार्यमा भनेको जस्तो प्रगति नहुनाले मानसिक रुपमा दवाव बढेर जान सक्छ। महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न नहुँदा सामाजिक रुपमा पनि प्रतिष्ठा गुम्न सक्ला।
क्रोधमा वृद्धि हुनाले भनेको जस्तो सफलता हात नलाग्न सक्ला । टाडाको यात्राको क्रममा दुर्घटना साथै आर्थिक घाटा पनि मिल्न सक्ने देखिन्छ। शनि ग्रहले काम बिगार्न सक्ने हुँदा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी नगरेकै उचित हुन सक्ला।
यस राशि हुनेहरुको लागि पनि शनि ग्रहको राशि परिवर्तन अशुभ सावित हुन सक्छ। कार्यमा विभिन्न प्रकारका वाधा आउन सक्ला भने विरोध गर्नेहरुको पनि वृद्धि हुन सक्ला। अपेक्षा गरे भन्दा धेरै मानसिक कष्ट भोग्नु पर्ने हुन सक्ला।
यस राशिमा अहिले शनि ग्रहको साढे सातको दशा चलिरहेको छ। जुनै पनि कार्यमा दुख मात्रै मिल्नाले मानसिक रुपमा तनाव बढेको महसुस हुन सक्ला भने शारीरिक रुपमा पनि स्वास्थ्य बिग्रने देखिन्छ। परिवारमा वातावरण बिग्रनाले परिवार देखि टाढा हुनु पर्ने हुन सक्ला।
यस राशिलाई पनि शनि ग्रहले केही दुख दिन सक्ला। तर यात्राको समयमा भने धेरै लाभ मिल्न सक्ला। स्वास्थ्यको विषयमा समस्या बढ्न सक्ने भएता पनि आर्थिक रुपमा भने धेरै राम्रो समय रहन सक्ला। नबनेको कार्य पूर्ण हुनाले खुशी मिल्न सक्छ।
यस राशिलाई भने शनि ग्रहले धेरै लाभ दिलाउने देखिन्छ। फसेको अर्थ उठ्न सक्ने देखिन्छ भने बिग्रिएका सम्पूर्ण सम्बन्धमा सुधार आउनाले आर्थिक रुपमा पनि लाभ मिल्न सक्छ। शुभ समाचार मात्र नभई उपहार समेत प्राप्त हुन सक्ला।
यस राशिलाई अनावश्यक धन हानि हुन सक्ला भने बन्न लागेको कार्य बिगार्न पनि शनिको हात हुन सक्ला। अपरचित व्यक्तिलाई विश्वास गर्नाले ठगिन सक्छ। पद-प्रतिष्ठा पनि बिग्रन हुँदा बोलि साथै व्यवहारमा समानता राख्न कोसिस गर्नु पर्ने देखिन्छ।
संसारमा ३ प्रतिशत मानिसको हत्केलामा मात्रै हुन्छ ‘X’ चिन्ह ! यदि तपाईको हातमा 'X' चिन्ह छ भने यस्तो हुनेछ तपाईको भविष्य !